Ndeipi dhayamondi inodhura kwazvo pasi? Tarisa uone hupfumi hwakagadzira iyo nhoroondo yemusika
ne admin pane 18-09-20
Ndeipi dhayamondi inodhura kwazvo pasirese? Kana zvisingakwanisike kuona kukosha kwayo, pamwe tinogona kuona mutengo wemhete yedhaimondi kuburikidza nedhaimondi inodhura kwazvo uye inodhura kwazvo munhoroondo yefandesi. Izvi zvakagadzira mhete yedhaimani munhoroondo munhoroondo yea ...
ne admin pane 18-07-02
Dhiamondi dzakagadzirwa nemaoko dzakaonekwa kare kuma1950. Zvisinei, kusvikira nguva pfupi yapfuura, mitengo yekugadzira yekurima mangoda yakatanga kudzikira zvakanyanya kupfuura mutengo wemadhaimani ekuchera. Ikozvino kufambira mberi kwesainzi uye tekinoroji kwakadzora zvakanyanya mitengo yekugadzira o ...
Nzira yekusarudza zvishongo pamusangano wegore negore?
ne admin pane 18-06-20
Kana Mutambo weChirimo uri kuuya, chii chichatumirwa kuTA kumuita kuti afare uye kunyemwerera mumaziso ake? Lingling anokuudza kuti dombo rematombo rakaringana. Zvinorehwa nezvishongo zvakasiyana zvinomiririra akasiyana rudo mazwi akavanzika. Iwe unogona here kuudza kana TA inogona kufungidzira kurudyi? Mhete - Rudo W ...
Iyo gem inonyatso kuviga aya akavanzika mazwi Anogona kuifungidzira?
ne admin pane 18-04-15